About Us -. YIWU EXJIA kushambadza ACHASHANDISWA CO, LTD.
Yiwu Exjia Advertising Material Co., Ltd. iri muna Yiwu guta, tiri nyanzvi nokushambadzira zvinhu anopfuura 18 makore. midziyo Vazhinji vave aivigirwa kunyika dzinopfuura 42, yakatsiga uye kunyatsoomerera yepamusoro kuzvidzora kwakavakirwa maawa 24 'QC, zvigadzirwa yedu kusanganisira: laminated flex mureza, zvemapuranga flex mureza (kusanganisira frontlit, backlit, mavara miviri uye blockout rimwe divi yakadhindwa), inopisa laminated uye Coated blockout kuti mativi ose akadhindwa. Hot laminated PVC nematende, Coated PVC nematende, zvemapuranga pajira riya. Printable PVC firimu, imwe nzira chiratidzo, nokuzvidzora namira raive nebutiro, ruvara raive nebutiro, donje kanivhasi. Tichifungisisa zvinhu, PVC chimiro puranga, pp bepa, mhuka zvinhu, Photo zvinhu, inotonhorera lamination firimu, kupisa sublimation mapepa, Wallpaper uye zvichingodaro.
tiri kushandiswa iri kugadzirwa uye mabikirwo nemaindasitiri ichi kwemakore 18, uye isu tiri nyanzvi mune National indasitiri mitemo uye chigadzirwa mitemo.
tine makore anopfuura 16 kubva pakutengeswa ruzivo, tinogona kupa vatengi basa zvakanakisisa.
tine maawa 24 QC dzose mabhanzi kurema, urefu, upamhi, pamusoro, kudhinda Chaizvoizvo, chiputiriso, chitaridzi.
tine 6 anoita Coated uye laminated uye karenda muchina, isu nokukurumidza kunogona kupa Delivery nguva.
tava aivigirwa kunyika 42. (kunzwisisa musika kudiwa kunyika dzakasiyana-siyana kwazvo), tinoziva zvinodiwa munyika dzakawanda pamusoro zvinhu uye unhu.
EXJIA anoteerera kuti kuenderera kuti ruzivo uye products.There vari patents mashanu, izvo zvinosanganisira zvina chitarisiko bvumidzwa, chakatangwa bvumidzwa muna EXJIA.
isu tose tiite zvatinogona kupa zvakanakisisa basa redu nemakasitoma: yepamusoro zvigadzirwa hwakaderera mutengo, yakanakisisa basa anokurumidza Delivery nguva.
Zvaidhindwa: manyoro ruvara, Fast nokuomesa kumhanya neingi. suit nokuti 2 kana 3 vanopfuura yokudhinda, wakatsetseka nomumativi, sutu mvura ingi, eco solvent ingi, solvent ingi, Anti ja, Anti UV, unogona kusvika kuna EU mureza. Max upamhi kusvika 5.10 m.
PVC nematende: PVC nematende pamwe simba pajira riya mukati, chakanakisisa tensile, inoparadza uye adhesion simba, Anti ja, Anti UV. Anti chakuvhe, Anti nembato, pose vanokwanisa kunge lacquered pamwe acrylic uye PVDF, zvinogona kunge kuzvidzora yakachena.
Max musono upamhi kusvika 5.10 M (201 '')
Basa redu kurwira chinzvimbo kukosha vatengi vedu uye vatengi vavo nguva dzose.
Kuchengeta akanakisisa zvigadzirwa, kupfuura akakwana basa pamwe inogutsa mutengo ndiwo musimboti wedu.
Tinogara chandagwinyira basa tenet kuti "Quality wokutanga, Technology ndiye hwaro".
Kana uchifarira zvinhu zvedu, unogona zvakare pasi kwenyu kutenga mashoko paIndaneti, uye tichaita kutaura iwe pakarepo, tinoramba yedu pamwe zvikuru vepachokwadi uye dai zvose murutivi ako zvose zvakanaka.
Vinyl In Kutamisirwa Film , One-Way Vision Vinyl Film , Wholesale Frontlit Banner Material, Solar Light tichifungisisa marata, Pvc Vinyl, Quality Flex Banner,